Nagu saabsan - OYE SHARCIYADA SHARCIYADA XADDIDAN
Dacwadda Muuqaalka Dharka
Madxafka Kiiska Muuqaalka
Muujinta Kiiska ee Uruurinta
Kiiska Muuqaalka Trophy
Muuji wararka golaha wasiirada
OYE SHARCIGA SHARCIYADA XADDIDAN
Feejignaanta Faahfaahinta & Hal-abuurka joogtada ah
Alaabada kiiska soo bandhigida ee loogu talagalay koox naqshadeeyayaal horumarsan iyo sheeko qaab cusub, qalab wax soo saar horumarsan ka dhigaya awooda wax soo saar aad u xoogan, iyo nidaamka maareynta wax soo saarka ee adag ayaa hubiya tayada wax soo saarka.
Gaarsiinta degdegga ah waxay si aad ah u gaabinaysaa wareegga furitaanka ee dukaamada, iyo faa'iidooyinka maaddiga ah waxay ka dhigayaan qiimayaasheenna caddaalad iyo dib-u-macaamil si loo kordhiyo shirarka macaamiisha.
Waxaan soo aruurinnay koox khibrad iyo khibrad leh leh oo wax soo saar ah Waxaan marwalba u hogaansanahay ruuxa hormarinta iyo hal abuurnimada, waxaana ku dadaalnaa wax soo saar heer sare ah.
OYE SHOWCAES CORPORATION LIMITED waa mid ku takhasusay soo saarida qalabka dukaanka, dukaamada, bandhigyada iyo waxyaabaha gaarka ah ee tafaariiqleyda caalamiga ah, jumladleyda, wax soo dajiyayaasha.Waxaan la shaqeynay in ka badan 110 macmiil oo ka kala yimid Yurub, USA, Australia iyo Koonfurta Ameerika.
Waxaan la shaqeynay magacyo caan ah adduunka oo dhan, sida Triumph, MauiJim, Bulova, Tiffany, Charlotte Tibury, Citizen, Raymond Weil ect Ka dib in ka badan 13 sano oo horumar ah, waxaan helnay khibrad hodan ku ah iibka iyo adeegga iibka kadib. Samee qalab gaar ah oo dukaan ah oo ku siiya bandhig shaqsiyeed. Kaliya keen fikirkaaga ama sawirkaaga, aan sameyno inta hartay. Waxaan kormeeri doonnaa wax kasta oo ka imanaya naqshadeynta, soo saarista, tijaabinta illaa rarka.
Dalbo amar maanta, waxaanan kuu soo rarineynaa adiga qiyaastii 30 maalmood.
Nooca Ganacsiga Soo saare
Wadan / Gobol Guangdong, Shiinaha
Cabbirka Warshadda 5,000-10,000 mitir murabac ah
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan bandhigyo, alaabada dukaanka, kuraasta bandhigga, miisaska muraayadda
Soo-saarista Qandaraaska Adeegga OEM Waa La Bixiyay
Wadarta Shaqaalaha 51 - 100 qof
Tirada Khadadka Wax Soo Saarka 5
Wadarta Dakhliga Sannadlaha ah US $ 2.5 Milyan - US $ 5 Milyan
Sanad La Aasaasay 2017
Suuqyada waaweyn Waqooyiga Yurub 18.00%
Waqooyiga Ameerika 15.00%
Bandhigyadayaga muraayadaha ayaa si fiican u fiican in la soo bandhigo dhuumaha qiiqaya iyo uumiga. Macaamiisha ayaa mid mid isugu daraya miisaska waxayna alaabtooda fiican dul dhigayaan khaanadaha macaamiisha ayaa inta badan dhaha "waxay umuuqataa mid aad u fiican"
AAN BILAABNO AAN KA HADALNO MASHRUUCAADA
Cinwaanka:No.2 Qiuxizhonglu Huiyang degmada, Huizhou, Shiinaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2023: Dhammaan Xuquuqda Ayaa Leedahay.